Khilaaf iyo Masayr, Minweyn iyo Biya-dhanaan – Rasaasa News
Apr 30, 2011 Khilaaf iyo Masayr, Minweyn iyo Biya-dhanaan
London, April 30, 2011 [ras] – Warar aanu ka helay magaalada London, ee dalka Ingriiska, ayaa sheegaya in uu khilaaf xun ka dhex taagan yahay Jwxo-shiil iyo afadiisa. Khilaafkaas oo la sheegay in uu salka ku hayo, guur gabadh yar oo uu Jwxo-shiil, ku qabo biyo-dhanaan.
Sida ay wararku sheegayaan, xaaskan yar ayuu Jwxo-shiil, qabay labadii sano ee ugu dambaysay. Arintaas oo ayna ka warhaynin bilcaanta wayn, ee degan dalka Ingriiska. Sida uu noosheegay ruuxa warka soo diray, Bilcaanta, ayaa sawirka ka heshay boorsada Jwxo-shiil, maalintii khamiista ahayd, isaga oo ka yimid Jarmalka, kolkii ay waydiisayna wuxuu u sheegay in ay ka mid tahay ciidama kooxda. Balse kolkii dambe ay run ka keentay!
Xaaska yar ayaa waxay ka mid ahayd gabdhihii yar yaraa ee laga soo afduubay baadiyaha gabalka Somalida Ogadeeniya, si tababar Jabhadeed loo siiyo sanadkii 2007.
Biya dhanaan ayaa hoy rasmiya u ahayd Jwxo-shiil, labadii sano ee ugu dambaysay, waxayna moodaysay bilcaanta wayn in uu kaga dhuumanayo ceebta iyo dhibaato lafihiisa haysata, ka dib kolkii uu gacmaha dhiig la galay.
Jwxo-shiil, ayaa guriga ka maqan tan iyo intii ay arintani soo baxday, waxaana la sheegayaa in uu joogo guriga gabdhiisa.
Xubnaha, kooxda Jwxo-shiil, oo da,a walba leh, ayaa waxay ka hirqadeen gabdho yar yar oo reer miyi ah, oo ay gaysteen Biya-dhanaan. Gabdhahaas yar yar badankooda eheladoodii ma sheegi karaan nolol iyo geeri waxa ay ku sugan yihiin.
Warar hoose ayaana sheegaya in gabadhan hada Jwxo-shiil, uu ku qabo Biyo-dhanaan in ayna eheladeedu ka warhaynin in ay dhimatay iyo in ay nooshahay.
Waxaanu isku dayeynaa in aan soo helo, magaca iyo qoyska ay tahay xaaska yar ee Jwxo-shiil.
Jwxo-shiil, oo ay kooxdiisa isku af dhaafeen Jarmalka, ayaa qaar ka mid ah wuxuu kula balansanaa todobaadka bilaaban doona guriga uu hada ka maqan yahay.
Haweenay Taageerta Kooxda Jwxo-shiil oo Isku Hor Qaawisay Hool uu Shir ka Socday Nairobi